Musharax Reer Jabuuti Ah Oo Cabasho Ka Muujiyey Siyaasada Soamliland Ee Dalka Jabuuti | Hangool News
Musharax Reer Jabuuti Ah Oo Cabasho Ka Muujiyey Siyaasada Soamliland Ee Dalka Jabuuti
March 17, 2016 - Written by Hangool
Hangoolnews;-Musharaxan shaaciyay inuu u taagan yahay xilka madaxwaynenimo ee dalka Djibouti Md Cabdiraxmaan Cadhoole oo safar ku tagay Magaalada Hargeysa ee dalka Somaliland ayaa sheegay in shacabka reer Djibouti khaati ka taagan yihiin faro galin uu sheegay inay ku hayaan siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland.
Musharax Cabdiraxmaan Cadhoole oo ka soo degay garoonka caalamiga ah ee Cigaal oo qolka Vip-da kula hadlay Tvga HCTV ayaa sheegay in shacabka Djibouti aad uga cawdaan faragalinta siyaasadeed ee ay ku hayaan dadka u taliya Somaliland sida uu hadalka u dhigay,isagoo sheegay in dagaalkii ciidamada badda ee Somaliland iyo Djibouti ku dhex maray xeebta Saylac ay doonayaan in labada dal ka wada hadlaan.
“Dawlad ahaan ha ka wada hadlaan,umadda reer Djibouti waxay aad uga cabataa faro galinta ay siyaasadda Djibouti ku sameeyaan ragga dawlada tan(Somaliland) ka taliyaa”ayuu yidhi Musharax Cabdiraxmaan Cadhoole.
Musharaxan u taagan jagada madaxwaynaha dalka Djibouti ayaa sheegay inuu dalka Djibouti u halgamay,isagoo tilmaamay in dadka reer Djibouti u baahan yihiin is bedel isla markaana qabyaaladdii ka baxday.
“Anigu nin reer Djibouti ah ayaan ahay oo xundhurtiisii taallo aabihiina u dhintay,Djibouti sidaad ogtihiin midnimo ayaa la istu taagay qabyaaladii way dhammaatay,umadda reer Djibouti way soo taabteen gidaarka,waxaan ku rajo waynahay inaan xilkaa ku guulaysto,rejadaydu umadda gacanteeda ayay ku jirtaa”ayuu yidhi Musharax Cabdiraxmaan Cadhoole.
Musharaxan oo wax laga waydiiyay inuu soo sharaxay Madaxwaynaha wakhtigan ee Djibouti Ismaaciil Cumar geelle ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin warkaasi,kana suurtoobin.
Dalka Djibouti ayaa la filayaa in ay doorashadu ka dhacdo bisha soo socota ee April sannadkan 2016 ka oo ay ku tartamayaa musharaxiin badan oo uu ku jiro madaxwaynaha dalkaasi ka taliya ee Ismaaciil Cumar Geelle oo markiisii afraad isa soo taagaya doorashadan.